ဘာကြောင့်မဲမပေးသင့်သလဲ No | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Myanma News » ဘာကြောင့်မဲမပေးသင့်သလဲ No
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Sep 20, 2010 in Myanma News, Opinions & Discussion |3comments
Burma catology NLD RFA US
ဘာကြောင့်မဲမပေးသင့်သလဲဆိုတာကို ကိုလင်းဝေကျော်ရဲ့ စက်တင်ဘာ ၂၀နေ့မဲမပေးဘဲငုံ့ခံကြတော့မှာလားဆိုတဲ့ ပို့စ်အမှီ NCGUB ဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာစိန်ဝင်းရဲ့ ဗွီအိုအေနဲ့ အင်တာဗျူးကို မိုးမခအင်တာနက် စာမျက်နှာမှာတွေ့လို့ ကော်ပီလုပ်တင် လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်နော့်အမြင်ကတော့ သပိတ်မှောက်သင့်ပါတယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဆိုတာ တရားမဝင်လို့ပါ၊ ထပ်ဆက်တူးရရင် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ရလဒ်ကို ဖျက်လို့မရပါ၊ အဆုံးစွန်ထိ ဆက်ပြောရရင် ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ခိုင်းတဲ့ နအဖရဲ့ တရားဝင်မှုကို ပြန်စဉ်းစားရပါမယ်။ ကျွန်နော်က ဒေါက်တာစိန်ဝင်း ပရိတ်သတ်တယောက် မဟုတ်ပါဘူး ဒါပေမဲ့သူ့အင်တာဗျူးက ကောင်းလို့ ပြီးတော့ မြန်မာလိုလည်း တင်ထားတာရှိလို့ မျှလိုက်ပါတယ်။
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုဝင်ဘာလ (၇) ရက်နေ့မှာ စစ်အစိုးရက ကျင်းပ ပြုလုပ်တော့ပါမယ်။ ဒီရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံဘဲ ဆန့်ကျင် သပိတ်မှောက်ကြတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိကြပေမယ့် ရွေးကောက်ပွဲကတော့ တကယ်ဖြစ်လာမယ့် အခြေအနေ ရှိနေပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီ ရွေးကောက်ပွဲ ပြီးသွားရင် ဆန့်ကျင် သပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ ဘယ်လို ဆက်လက် ရပ်တည်ကြမလဲ။ နိုင်ငံရေးဗျူဟာတွေ ပြောင်းလဲ ချမှတ်ပြီး လှုပ်ရှားကြမလား ဆိုတာတွေကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံ ညွှန့်ပေါင်းအစိုးရ (NCGUB) ဝန်ကြီးချုပ် ဒေါက်တာစိန်ဝင်း ကို ဦးကျော်ဇံသာ က ဆက်သွယ် မေးမြန်း ဆွေးနွေး သုံးသပ် တင်ပြထားပါတယ်။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ အကျဉ်းချုံးအားဖြင့် ရှင်းပါတယ် – ပြည်တွင်းက NLD ရဲ့ သဘောထား စောင့်တယ်။ NLD ကလည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောပြီးပြီ။ ကျနော်တို့အနေနဲ့လည်း ပြတ်ပြတ်သားသား ပြောပြီးပြီ။ အဲဒါ ဘာလဲဆိုတော့ ကျနော်တို့အနေနဲ့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို လက်မခံဘူး။ အဲဒီတော့ ဒီ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေကို အခြေပြုတဲ့၊ အခြေခံတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ဆိုတာကတော့ တစ် အချက် ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံဘူး။ နိုင်ငံရေးပြုပြင် ပြောင်းလဲရေးကို ကျနော်တို့ ယုံကြည်မှု မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေက အားလုံး သိတဲ့အတိုင်း စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကို ဆက်သွားနိုင်ဖို့ လုပ်ထားတာ။ ဘန်းပြပြီးတော့ လူတွေကို ခေါင်းရှုပ်အောင် လုပ်ပြီး ပြထားတာ၊ ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။ အရပ်သားအစိုးရလည်း ဘာမှ မလုပ်နိုင်ပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဒါပေမဲ့ အဲဒီအထဲမှာ ဆရာတို့နဲ့ တချိန်တည်း ဒီမိုကရေစီအရေး လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊ ရွေးကောက်ခံခဲ့ကြရတဲ့ ပြည်သူ့ လွှတ်တော် ကိုယ်စားဟောင်းတွေ၊ နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တချို့က ဒီ ရွေးကောက်ပွဲကို လက်ခံပြီးတော့ ၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲကို ဝင်မယ်ဆိုပြီး သဘောထားကြေညာထားတာ ရှိပါတယ်၊ ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ သူတို့အပေါ် ဆရာတို့ ဘယ်လို သဘောထားပါသလဲ။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ဒီနေရာမှာ ကျနော် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ပြောပြမယ်။ တစ်အချက် ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲက အပြတ်အသတ် အနိုင်ရခဲ့တဲ့ NLD ပါတီ မပါဘူး၊ ဒါက တရားဝင် ပါတီအတွင်းမှာ ဆွေးနွေးပြီးတော့ ဆုံးဖြတ်ထားတာ၊ ဒါကရှင်းတယ်။ ဒုတိယ ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ပါဝင်ပြီး အရွေးခံခဲ့တဲ့ ပါတီတွေ – ဥပမာ SNLD၊ UNLD သူတို့ မပါဘူး။ နောက် ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ အဖွဲ့တွေ တော်လှန်ရေးအဖွဲ့ အများစုက ရွေးကောက်ပွဲကို လက်မခံဘူး။ ကျန်တဲ့ ၁၉၉၀ မှာ ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပြန်ပြီး အရွေးခံတယ်။ NLDက တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပြန်ပြီး အရွေးခံတယ်။ အဲဒီအခါမှာ NDF ဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ပြန်ပြီး အရွေးခံတယ်။ NLD နာမည်နဲ့ အရွေးခံတာ မဟုတ်ဘူး။ NLD အလံအောက်မှာရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ NLD ကလည်း ဒါကို သဘောတူတာ မဟုတ်ဘူး။ အဲဒီတော့ သူတို့က NDF အမည်နဲ့ အရွေးခံတယ်။ ကျနော် ဆိုလိုတာက ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရတဲ့ပါတီတွေက မပါဘူး။ ဒါကိုတော့ ရှင်းရမယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တွေပါမယ်။ တချုို့လူတွေပါမယ်။ ၁၉၉၀ တုန်းက ဝင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ တချို့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပြန်ပါခဲ့တယ်။ သို့သော်လည်း ၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲမှာ အနိုင်ရခဲ့တဲ့ ပါတီတွေ ကျနော် ဆိုလိုတာက NLD တို့ SNLD, UNLD တို့ မပါဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ဆိုတော့ အခု ခွဲထွက်သွားတဲ့လူတွေ အရင် ရွေးကောက်ပွဲကို ဖြတ်သန်းခဲ့ဖူးတဲ့ နိုင်ငံရေးသမားတချို့ ပါဝင်တယ်။ အခု ၂၀၁၀ မှာ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီးတော့ ဖြစ်လာမယ့် အစိုးရထဲမှာ သူတို့ အစိတ်အပိုင်းတခုနဲ့ ပါကောင်း ပါလာပါလိမ့်မယ်။ အဲဒါကို ဆရာတို့ ဘယ်လို သဘောထားသလဲ။ သူတို့ ဝင်ပြိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ သူတို့ အရွေးခံရပြီးတော့ အသစ် ဖွဲ့စည်းလာတဲ့ ဘယ် ပုံသဏ္ဌာန် အစိုးရအဖြစ် သူတို့ပါလာခဲ့ရင် ဆရာတို့ ဘယ်လို သဘောထားမလဲ။ ဒါကို စစ်အစိုးရလို့ အရင်လို ဆက်ပြီး သုံးနှုန်းကြမလား။ ပြည်သူလူထု တစိတ်တဒေသ ပါတဲ့ အစိုးရလို့ ခေါ်မလား။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ကျနော်တို့ ဘာမှမခေါ်ဘူး။ ကျနော်တို့ ပြောထားတာ ရှင်းတယ်။ အခြေခံဥပဒေကို မူတည်ပြီး လုပ်တဲ့ဟာကို အယုံအကြည် မရှိဘူး။ လက်မခံဘူး။ နောက်တခု ကျနော် ထပ်ပြောမယ် – ကောင်းပြီ ကျနော်တို့ အခု အခြေအနေဟာ ၁၉၉၃ တုန်းက National Convention အမျိုးသားညီလာခံ အစနဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်တယ်။ အမျိုးသားညီလာခံ စတုန်းကလည်း တချို့တလေက ဒီအပေါ်မှာ အကောင်းမြင်တယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ငါတို့ ဝင်လုပ်ရမယ်။ မလုပ်ရင် ဒီကောင်တွေက သူတို့လုပ်ချင်ရာ လုပ်သွားမယ်။ တချို့ကျတော့ နောက်ဆုံးကျတော့ ကျုပ်တို့ပြောမယ်၊ ပေးမယ် စသည်အားဖြင့် အပစ်အခတ် ရပ်စဲအဖွဲ့တွေလည်း ပြောတာရှိတယ်။ ကျနော်တို့နဲ့ ဆွေးနွေးခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ NLD ကတော့ သူတို့ လိုချင်တာ ပြောတယ်။ မရတော့ walkout လုပ်တယ်။ walkout လုပ်တာကို ထွက်သွားတယ်လို့ ပြောတယ်။ နောက်ပိုင်း SNLD, UNLD တို့လည်း မပါဘူး။ အခြေအနေက ခပ်ဆင်ဆင်။ ဒါပေမဲ့ National Convention တုန်းက နှစ်ပေါင်း အများကြီးကြာတယ်။ ၁၉၉၃ ကနေ သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ကျော်လောက်မှ ပြီးတယ်။ အခု ကျနော်တို့ ဒီလောက်စောင့်ဖို့ မလိုဘူး။ အဲဒီတော့ ဆရာတို့ ကိုယ်တိုင် တွေ့မြင်မှာက သက်တမ်းက လေးနှစ်လား။ လေးနှစ်အထိ မစောင့်ရဘူး။ နောက်ထပ် နှစ်နှစ် အတွင်းမှာ အားလုံးက civil government အရပ်သား အစိုးရက ဘာလုပ်နိုင်မလဲ တကယ်တမ်း ပြည်သူလူထု အတွက်၊ နိုင်ငံရေးအတွက်။ တခါ ရွေးကောက်ခံရတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ၊ အမတ်တွေ ကိုယ်စားလှယ်တွေကလည်း တကယ်တမ်း ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ ဥပဒေ ပြဋ္ဌာန်းနိုင်မလား။ demonstration တွေ လုပ်နိုင်မလား၊ ပြောနိုင်မလား၊ ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းနိုင်မလား။ ဒီ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေရဲ့ ထုံးတမ်းအစဉ်အလာ လုပ်နိုင်တဲ့အလုပ်တွေ ဘာတွေ လုပ်နိုင်မလဲ။ ဒါတွေ ပေါ်လာမှာ။ နိုင်ငံရေးပါတီတွေ အခု တရားဝင် နိုင်ငံရေးပါတီတွေ သူတို့တွေကရော ဘာလုပ်နိုင်မလဲ။ နောက်ထပ် နှစ်နှစ်ဆိုရင် ပေါ်ပြီ။ အဲဒီအထိ သီးခံ စောင့်လိုက်ပါ။ စောင့်ကြည့်ပြီးတော့ ဆရာတို့ကိုယ်တိုင် reporter တွေ ကိုယ်တိုင် သတင်းထောက်တွေ ကိုယ်တိုင် သတင်းဌာနတွေ ကိုယ်တိုင်က assess လုပ်ပါ။ ကျနော်ပြောခဲ့တာကို ပြန်ပြီး assess လုပ်ပါ။ ဘယ်လောက် လုပ်နိုင်ခဲ့သလဲ လွန်ခဲ့တဲ့ အခြေအနေတုန်းက မျှော်မှန်းခဲ့သလဲ၊ အခု တကယ်တမ်း ဘာတွေ လုပ်နိုင်သလဲ။ အဲဒီအပေါ်မှာ ဆွေးနွေးကြပါ၊ ပြောဆိုကြပါ။ အခုကတည်းက ဘာပြောနိုင်တယ်၊ လုပ်နိုင်တယ်။ ဒါ ကျနော်အမြင်နဲ့ ပြောပြီးပြီ သူတို့လည်း သူတို့အမြင်တွေ ရှိကြမယ်။ ကျန်တဲ့လူတွေလည်း အမြင်တွေရှိကြမယ်။ ဒါပေမဲ့ judgment ကတော့ သိပ်မစောင့်ရဘူး၊ နှစ်နှစ် သုံးနှစ် ဆိုရင် ပေါ်ပြီ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကျနော်ကတော့ အဲဒါကို ဆက်ပြီး သိချင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကတော့ သတင်းပို့မှာပါ။ သတင်းသမားကတော့ သတင်းပို့ပါမယ်။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ သတင်းပို့ရုံတင် မကဘူး။ ဆရာတို့ ဒါကို ပြန်ပြီးဖေါ်ရမယ်။ ကျနော် ဟိုအရင်တုန်းက ပြောခဲ့တာတွေ ရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ဘယ်သူမှ ဂရုမစိုက်ကြတော့ဘူး။ ဥပမာဆိုရင် Bangkok Process ကျနော်တို့က negative ယူတယ်။ ဘာမှ ဖြစ်လာမှာ မဟုတ်ဘူး။ အခု ဘယ်သူမှ ပြန်မဖော်တော့ဘူး။ မေ့သွားပြီ။ ဆရာတို့ သတင်းဌာနကလည်း ပြန်ပြောရမယ်။ ကျနော်ပြောခဲ့တာ ဘယ်လိုလဲ။ တကယ်ဖြစ်တာ ဘယ်လိုလဲ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ကျနော် တခုဆက်ပြီး မေးချင်တာက အဲဒီလို ဖြစ်မလာမယ့်၊ ဘာမှ အဖြေကောင်း ရလဒ်ကောင်း ပေါ်မထွက်လာမယ့် နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်က ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် ဆက်ပြီး လုပ်တော့မယ်။ ဒီဖြစ်စဉ်ကို ဟန့်တားနိုင်မလား။ ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့ ဒါကို လက်မခံတဲ့ ပါတီကြီးတွေ၊ နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေ အခု အစိုးရက တရားဝင် ဖျက်သိမ်းတဲ့ အမိန့်ကြေညာချက်တွေ ထုတ်ပြန်လာတယ်။ သူတို့လုပ်ပိုင်ခွင့် ဘောင်တွေ ကျဉ်းလာတယ်။ သူတို့ ဘာတွေ ဆက်လုပ်နိုင်မလဲ။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ကျနော် ပြောပြမယ် – NLD တရားဝင်တုန်းကရော ဘာလုပ်နိုင်သလဲ။ တရားဝင်တုန်းကလည်း နအဖ က ဖမ်းချင်တဲ့လူကို ဖမ်းတယ်။ ဖမ်းချင်တဲ့ ဆင်ခြေဆင်လက်နဲ့ ဖမ်းတယ်။ NLD ဦးတင်ဦး၊ ဦးဝင်းတင် ခေါင်းဆောင်တွေကို ဖမ်းခဲ့တယ်။ ကျန်တဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုလည်း ဖမ်းခဲ့တယ်။ တရားဝင် ဆိုတာကလည်း office ဆိုတဲ့ တရားဝင်ရုံးကလည်း တခုပဲ ရှိတယ်။ အဲဒီရုံးကလည်း ဘာမှလုပ်လို့ မရဘူး – ဂျာနယ်တွေ ဘာတွေ ထုတ်လို့ မရဘူး။ အဲဒါ တရားဝင်မှုဆိုတာ ဘာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်း – ဘာထူးလဲ ကျနော်အမြင်တော့။ တရားဝင်မှုလုပ်ပြီးတော့ တရားဝင်တဲ့အတွက် ဒါတွေဒါတွေ လုပ်နိုင်တယ် ဆိုတာမှ မဟုတ်တာ။ သူတို့ လုပ်ချင်တိုင်း လုပ်တာပဲ။ အခု တရားမဝင်လည်း သိပ်မထူးဘူး။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အဲဒါက NLD အပိုင်း။ ကျနော် သိချင်တာက ဆရာတို့ ပြည်ပ အခြေစိုက်တဲ့ အစိုးရဖိနှိပ် ချုပ်ချယ်မှုအောက်က လွတ်မြောက်နေတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ လွတ်မြောက်နယ်မြေလို့ သုံးကြတယ်။ ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေက ဘာလုပ်ကြမလဲ။ ဘယ်လို ဗျူဟာ ရှိကြသလဲ။ ဒီ ရွေးကောက်ပွဲပြီးလို့ သူတို့ကတော့ နိုင်ငံတကာကို ပြောလိမ့်မယ် ဒါ constitutional govern ဖြစ်တယ်။ ပြည်သူတွေ ရွေးကောက်တယ်။ ဟုတ်သည်ရှိ မဟုတ်သည်ရှိ အဲဒါကို ပြည်ပအင်အားစုက ဘာလုပ်ကြမလဲ။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ကျနော်တို့က ဖော်ထုတ်ကြရမှာပေါ့။ တစ်အချက် သူတို့ညာတာကို ကျနော်တို့က ဖော်ထုတ်နိုင်တယ်။ ဖော်ထုတ်ပြီးတော့ ပြရမယ်။ ပြည်တွင်းမှာလည်း ဖော်ထုတ်မှာပါ။ ဒီအတိုင်း မနေပါဘူး။ ဥပမာဆိုရင် သူတို့ညာနေတာပဲ nuclear ambition, tunnel တွေ တူးနေတာ ကြေညာတာမှ မဟုတ်တာ ပေါ်လာခဲ့တယ်။ ဘူးပေါ်လာသလို ပေါ်လာခဲ့တယ်။ ဒီအတိုင်းပဲ သူတို့ ဘာလုပ်သလဲ။ အခုဆိုရင် သူတို့လုပ်ပြီး သိပ်မကြာဘူး ပေါ်လာတယ်။ သူတို့အပြောင်းအလဲတွေ reshuffle ကိစ္စတွေ။ တချို့ကို official မကြေညာသေးဘူး။ အခု သတင်းထဲမှာ ထွက်နေပြီ၊ ပေါ်နေပြီ။ ကမ္ဘာကလည်း သိနေတယ်။ အကုန်လုံး သိနေတယ်။ တခုတော့ရှိတယ် ကိုယ့်ရဲ့ self-interest နဲ့ လိုက်ပြီး ဖေးဖေးမမ လုပ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ၊ ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ရှိတယ်။ ဒါကလည်း မတတ်နိုင်ဘူးပေါ့။ ဒါတွေကတော့ အမြဲတမ်း လုပ်နေမှာပေါ့။ ကျန်တာတော့ ကျနော်တို့ ဖော်ထုတ်လို့ ရတယ်။ ကျန်တဲ့နည်းနဲ့ ပံ့ပိုးလို့ရတယ်။ ပြည်တွင်းက လှုပ်ရှားနေတဲ့လူတွေကို ကျနော်တို့ လုပ်စရာ ရှိတာတော့ ဆက်လုပ်မှာပေါ့။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ အခု ဖွဲ့စည်းခဲ့ကတည်းက ဘယ်လောက်အထိ ရှေ့ကို တိုးတက်ခဲ့တယ်လို့ ဆရာတို့ ပြန်ပြောင်း သုံးသပ်ရင်ပေါ့။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ဘယ်ဖွဲ့စည်းခဲ့တာလဲ။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ၈၈ နောက်ပိုင်းမှာ ပြည်ပ အခြေစိုက်တဲ့ ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေ ပေါ်ပေါက်လာတာ။ ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတာ။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ကျနော် အခုနပြောသလို – စိတ်တိုင်းကျတော့ မဟုတ်ဘူးပေါ့။ ကျနော် တယောက်တည်း မဟုတ်ဘူး။ ဒီအပြင် လူတွေလည်း အားမလိုအားမရတွေ အများကြီး ရှိမှာပေါ့။ မင်းတို့ ဒီထက်မက လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့။ ဆယ်ဆတောင်မက လုပ်နိုင်ရမှာပေါ့။ ဘယ်အဖွဲ့အစည်းတွေ၊ ဘယ်နိုင်ငံတွေမှာ ဘယ်လိုလုပ်သွားတယ် ဆိုတာတွေတော့ ပြောကြမှာပေါ့။ တဖက်ကလည်း လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ မရဘူး ဆိုတာလည်း သဓကတွေ အများကြီး ရှိတယ်။ ပြည်ပမှာလည်း ခက်ခဲမှုတွေ အများကြီးရှိတယ် ဆိုတာလည်း လူတိုင်း သိနေတယ်။ ကျနော်ပြောပြမယ် – ဟိုအရင်တုန်းက Democratic Voice of Burma ဆိုတာ မရှိဘူး၊ BBC, VOA ရှိတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ RFA ရောက်လာတယ်။ Democratic Voice of Burma ကို ကျနော်တို့ စခဲ့တယ်။ ဒီ DVB ကပဲ ပြည်တွင်းက ကိစ္စတွေကို ဖော်ထုတ်တာ အားလုံးအသိ – နျူကလီးယားကိစ္စ၊ သံဃာကိစ္စတွေ အားလုံးကို ဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီလို ဖော်ထုတ်နိုင်တယ် ဆိုတာ ပြည်ပမှာ လုပ်နေတဲ့လူတွေ တိုးတက်မှု ရှိလို့ ဖော်ထုတ်နိုင်တာပေါ့။ ပြည်တွင်းကလည်း စွန့်စားမှုနဲ့ ရှင်းရှင်းပြောရရင် သတင်းပေးလို့ ဖော်ထုတ်နိုင်တာပေါ့။ ဒါက သတင်းပေးနဲ့ ဖော်ထုတ်ရုံပဲ။ ကျန်တာဆိုရင် ကျနော်တို့ ထွက်လာခဲ့တဲ့ အချိန် တခြားအဖွဲ့တွေလည်း ပါတယ်။ ကျနော်တို့ တယောက်တည်း လုပ်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ တယောက်တည်း credit မယူချင်ဘူး။ သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ စထွက်လာတုန်းက sanction ဆိုတာ မသိဘူး၊ မကြားဖူးကြဘူး။ အခုဆိုရင် အထူးသဖြင့်တော့ US မှာ ပိုလုပ်ရမယ်။ အဲဒီလို တိုးတက်မှုတွေတော့ ရှိတာပေါ့။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ ရှေ့ ကို ဒီလို ရပ်တည်ပြီးတော့ ဒီနှုန်းနဲ့ပဲ လှုပ်ရှားမလား။ သို့မဟုတ် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာ အစိုးရက ပုံသဏ္ဌာန် တမျိုး ဖွဲ့လိုက်လို့ ဗျူဟာပြောင်းပြီး လှုပ်ရှားဖို့ အစီအစဉ်များ ရှိပါသလား။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ ဗျူဟာတော့ မပြောင်းဘူး။ သူတို့လည်း ဗျူဟာတော့ ပြောင်းတာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့လည်း လိမ်နေတာ။ ကျနော်တို့ကလည်း တိုက်ပွဲကို ဆက်တိုက်မယ်။ ဒါ ပိုတောင် ပြတ်သားသွားတယ် လို့ မြင်တယ်။
ဦးကျော်ဇံသာ ။ ။ နိုင်ငံတကာ အသိုင်းအဝိုင်းကရော သူတို့လှည့်ကွက်ထဲမှာ ပါသွားနိုင်မလား။ ဆရာတို့က ဒါကို တည့်မတ်ပြီးတော့ ထိန်းသိမ်းသွားနိုင်မယ့် အခြေအနေ ရှိပါသလား။
ဦးစိန်ဝင်း ။ ။ လှည့်ကွက်ထဲမှာ ပိုပါဖို့တော့ မဟုတ်ဘူး။ နဂိုတည်းက ပါချင်တဲ့သူတွေကတော့ ပါသွားမယ်။ ဘယ်သူဆိုတာ ကျနော်တို့ အားလုံးသိနေတယ်။ ထိန်းသိမ်းဖို့ကတော့ လိုတာပေါ့။ ဒါကြောင့်မို့ လူတိုင်းလူတိုင်းက အားသွန်ခွန်စိုက် အလုပ်လုပ်ရမယ်။ အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ ကျနော်တို့ နိုင်ငံအတွက် ဘယ်သူမှ လုပ်ပေးမှာ မဟုတ်ဘူး။
ဒီလို ဆိုတော့လည်း တမျိုး ဟိုလို ဆိုတော့လည်း တမျိုး.. ဘာလုပ်ရမှန်းကို မသိတာ.. မဲမပေးဘဲ နေတော့ မဲရပိုင်ခွင့် မဆုံးရှုန်းဘူးလား။ မဲမပေးရင် ဆန့်ကျင်သူ ဆိုပြီး ပြောတာမျိုးကြားမိလို့ တကယ်ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။
The ruling military Junta is planning to legitimize its brutal regime acceptable to their own taste and standard. It is becoming clearer by looking at their actions on daily basis. No person or organizations potentially dangerous to out seat their chance of winning the election is allowed to participate in the race. Daw Suu, jailed student leaders, well known politicians, and people`s stars are virtually excluded from the race. No ethnic leaders with patriotic spirits are allowed. The financial restraint imposed on participants are another way of excluding potentially winning individuals from the race. It all started with illegal 2008 constitution. By divide and rule, some section of NLDs were approached by military intelligence by all means of dirty methods. The body of evidences are endless here to understand the sheer determination of Junta to annihilate the opposition once and for all. Who can stand up to this fascists? They can kill ten thousands demonstrators, monks or Saints. Do not expect any help from popular uprisings which died down to repressive brutal crack down by Fascists. It is waste of life.
1. NLD must seriously think about going global. In free world, Burma campaign set up by NLD offices would be influential and effective. The head quarter could be set up preferably in an Asian country. Daw Suu can stay back in Burma. We should learn how equally ruthless Apartheid regime was brought down to its knee by aggressive global campaign of African National Congress, in South Africa.
2. People must make commitment to Boycott the Election. The mass Boycott in millions would speak in the strength of Cyclone force to blown apart the plan of the Junta. This is the realistic chance opened for people to flex their muscle against minority fascists. Failing to grab this once inalife time chance given by fascists would be disaster for people. I can not think of any chance, any alternative for people escaping from boots of military dictatorship. BOYCOTT THE ELECTION.
သူတို့ ရဲ့ ပါတီ နှစ်ခုကို အထက်အောက်ဖြစ်အောင် လုပ်ထားတယ် (ဟန်ပြပြီးအငြင်းခုန်လုပ်ထားတယ်) ရွေးကောက်ပွဲက မစရသေးဘူး သူတို့ ကသေချာပေါက်နိုင်နေပြီ ဆိုတာ ကို သိဘို့ လိုလိမ့်မယ်
(ကိုယ်က ဘယ်လိုပဲပြိုင်ပြိုင် သူက နိုင်နှင့်နေပြီ )သူတို့ တကယ်လိုချင်နေတာကလည်း သူ့ကိုလာပြိုင်မယ့် ပြိုင်ဘက်ပဲဖြစ်တယ် ဆိုလိုတာက ပြိုင်ဖက်ဆိုတဲ့ အဖွဲ့ တွေရှိမှ သူက အနိုင်ယူလို့ ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် ယှဉ်ပြိုင်ပါတီတွေဆိုတာ သူ့ အတွက် တော်တော် အရေးကြီးတဲ့ သူ့ ကိုအပေါ်ရောက်အောင် တွန်းတင်ပေးမယ့် သူ့ ကိုတရားဝင် အနိုင်ရသွားစေမယ့် အဖွဲ့အစည်းတွေဖြစ်နေကြတယ်
ကိုယ်ထည့်လိုက်တဲ့ပါတီတွေ(တစညနဲ့ ဖွတ် ကလွဲရင်) နိင်စရာမရှိဘူး
ဖွတ်က အထက် တစညက အောက် မယုံမရှိနဲ့ဒီတော့ကိုယ်လုပ်လို့ ရတာက မထည့်နဲ့ 
ကိုယ်ကအခြားပါတီကို မဲထည့်လိုက်လို့ သူတို့ တရားဝင်နိုင်သွားမှာ အမှန်မှာ ဘယ်သူမှဝင်မပြိုင်သင့်ဘူး